Dhuqidha afka laiskaliyo raxadha - iftineducation.com
Dhuqidha afka laiskaliyo raxadha
iftineducation.com – dhunkashadu waa qayb aad u muhiim ah oo ka mid ah nolosha waana furaha koowaad ee macaanka raaxada haddii laga tagana waxaa hubaal ah in noloshaas aad dhisayso aysan nah yeelanayn ama dha-dhanku ka duulayo(ka dhumayo).
si aad iskaga ilaaliso qaladaadka ka imaada aqoon la’aantaada dhunkashada isla markaana aad u dhistid xiriir tayo leh waxaan kuusoo gudbinaynaa talaabooyinka muhiimka ah ee ay tahay in aad qaado si aad ugu guulaysato dhunkasho macaan badan anaga oo ku xijin doona qaababka loo dhunkado lamaanahaaga adigoon waalayn ama aan qaribaad geysan.
shan ilaa lix qodob oo muhiim ah ayaan soo bandhigaynaa waxaana lagaa rabaa:
1) tusi in aad xiisaynasid:
waxaad soo saari kartaa calaamado mujinaya in aad rabtid dhunkaso, adigoon u soo dhaqaaqin aad samaysid ama aanba afka ka oran.
dhugo ama eeg si degen qofka kale bishimihiisa ama dibnihiisa
dibnahaaga ama bishimahaaga ha xirin fur kana dhig kuwo jilicsan hana wada furin si debecsan u kala fur oo aad dibintaada hoose gaari kartid.
afkaaga dhaq-dhaqaaji dibnahana is marmari si aad ugu kaalmaysid jiljieecin
2) jebi waxa idiin dhexeeya
hadaad is leedahay waxaad tahay geesi hal dhunkasho oo gacanta ah iyo wixii la mid ah ayaa jebin kara daboolka
haddii aad gabar dhunkanaysid gacanteeda soo qaad si tartiib ah dhanka afkaaga ugu soo aadi ka si xariifnimo ah dibnahaaga u saar dhanka danbe e gacanteeda. 3-4 seken ayaa kugu filan inta aadan ka qaadin.
haddaad wiil dhunkanaysid ku soo foorarso oo dhabanka ka dhunko dibnahaaga ha ahaadaanoo kuwo debecsan ha u dhaqmin sidii adoo dhunkanaaya caruurtaada ama waalidkaa. u badi dhanka u dhow dibnihiisa.
3) u bedel habkaaga mid rabitaan iyo kacsanaani ku jirto:
sii lamaanahaaga naftaada ooo idil iskuna bedel daacad dhamaystiran oo doonaysa in wax loo qabto.
si wanaagsan u dheh in aad rabtid baashi codka hoos u dhig indhahaagana xir. tani kali ah ma keenayso in aad dareen qoto dheer aad xambaarsantahay xitaa waxay kicinaysaa dareenka qofka kale. wuxuu isku dayayaa in uu kuu soo dhowaado si uu kuu maqlo.
si aad ah u dhaqan xoogana saar waxyaalaha hoose sida adoo dhahayo waad qurxoontahay, indhahaaga waa isoo jiiteen, qosolkaaga waan ka helaaa, maba aaminsani in aan ku haysto ma runbaa ma ku haystaa.
4) haday dhammaan kuu shaqayn waayaan si dadban u waydii:
waxaan ka jeclaan lahaa ma jirto dhunkashdaada, gacaliye/gacaliso soo dhowow waan ku dareemayaa i dhunku ugu horayn iwm…
5) dhunkashda ku bilow:
wax waqti ah ha ku dhumin wax kale mar alaale iyo markaad dareento lamaanahaaga in uu u tafa xayta baashaal iyo baashi.